သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေများ – သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေများ
စဉ် ဥပဒေအမည် မှတ်ချက်
၁။ သိပ္ပံ၊နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ် တီထွင်မှုဥပဒေ
(၂၅-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/၂၀၁၈)ဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၂)
(၄-၇-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/၂၀၁၄)ဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၈)
၃။ တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းနည်းပညာဥပဒေ ဆောင်ရွက်ဆဲ
၄။ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးဆိုင်ရာ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေ
၆။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ
No Name Of Law Remark
(1) Science, Technology and Innovation Law.
Proclamation No.(45/2018) of the Pyidaungsu Hluttaw Office was announced on (25-6-2018) .
(Pyidaungsu Hluttaw Law No.22)
Read More… Prescribed
(2) Standardization Law
The Law on Standards was promulgated on (4.7.2014) by Proclamation No. (60/2014) of the Pyidaungsu Hluttaw Office.
(Pyidaungsu Hluttaw Law No.(28)
(3) Precision measurement Technology Law Ongoing
(4) Technical and Vocational Education and Training Law
(5) Nuclear law
(6) Information and Communication Technology Development Law
Total views : 293592